KEDU IHE DỊ MMA GOOGLE CHROME MA Ọ BỤ YANDEX BROWSER - NCHỌGHARỊ - 2019
Google Chrome vs Yandex Nchọgharị: ihe ị ahọrọ?
N'oge ahụ, Google Chrome bụ ihe nchọgharị kachasị ewu ewu n'ụwa. Ihe karịrị pasent 70 nke ndị ọrụ na-eji ya na-aga n'ihu. Otú ọ dị, ọtụtụ ndị ka nwere ajụjụ banyere ihe dị mma karịa Google Chrome ma ọ bụ Yandex Browser. Ka anyi gbalịa iji ha tụnyere ha ma kpebie onye mmeri.
Na mgba maka ndị ọrụ ha, ndị mmepe na-anwa ịmezi oghere nke ndị ntanetị weebụ. Mee ka ha dị mfe, nghọta, ngwa ngwa. Ha na-aga nke ọma?
Isiokwu: Google Chrome na Yandex Browser Comparison
Ịgba ọsọ Na nnukwu njikọ ọsọ, ihe nchọgharị abụọ na-amalite na ihe dị ka 1 ruo 2 sekọnd.
Ịgba ọsọ ntinye akwụkwọ Mbụ abụọ peeji nke na-emeghe ngwa ngwa na Google Chrome. Ma saịtị ndị ọzọ na-emepe ngwa ngwa na nchọgharị site na Yandex. Nke a na-agbanye na mbido nke atọ ma ọ bụ karịa. Ọ bụrụ na saịtị ahụ na-emeghe na obere oge dị iche, ọsọ Google Chrome na-adịkarị elu karịa Yandex Browser.
Ọrụ ncheta N'ebe a, Google dị mma ma ọ bụrụ na ị mepee n'otu oge ahụ karịa 5 saịtị, mgbe ahụ, ibu ahụ dịka otu.
Ntọala nfe na njikwa njikwa Ndị nchọgharị abụọ ahụ na-agbanye ntọala dị mfe. Otú ọ dị, Yandex. Njikọ Nchọgharị dị iche iche, na Chrome bụ ihe omimi.
Mgbakwunye Google nwere ụlọ nkwakọba ihe na ndozi ya, nke Yandex enweghị. Otú ọ dị, nke abụọ ejikọrọ na o nwere ike iji Opera Addons, nke na-enye ohere iji ndapụta na Opera na Google Chrome. Ya mere n'okwu a ọ ka mma, n'ihi na ọ na-enye gị ohere iji ohere ndị ọzọ, ọ bụ ezie na ọ bụghị nke ya.
Nzuzo N'ụzọ dị mwute, ndị nchọgharị abụọ na-anakọta ọtụtụ ozi banyere onye ọrụ ahụ. Naanị otu ọdịiche: Google na-eme ya n'ihu ọha, Yandex na-ekpuchikwa ya.
Nchekwa ozi Ihe nchọgharị abụọ ahụ na-egbochi saịtị echedoghi. Otú ọ dị, Google nwere atụmatụ a maka nsụgharị desktọọpụ, na Yandex na ngwaọrụ mkpanaka.
Originality N'eziokwu, Yandex Browser bụ otu Google Chrome. Ha abụọ nwere ụdị ọrụ na ikike ndị yiri ya. N'oge na-adịbeghị anya, Yandex na-agbalị ịpụ, mana atụmatụ ọhụrụ, dịka ọmụmaatụ, mmegharị arụmọrụ na òké. Otú ọ dị, ọ fọrọ nke nta ka ndị ọrụ ghara iji ya.
Ị nwere ike inwe mmasị na nhọrọ nke mgbasa ozi VPN n'efu maka ihe nchọgharị:
Ọ bụrụ na onye ọrụ ahụ chọrọ ngwa ngwa na ngwa ngwa, ọ ga-aka mma ịhọrọ Google Chrome. Na maka ndị ọkacha mmasị na-ahọrọ interface na-adịghị ahụkebe na ndị dị mkpa karịa tinye-ons na ndọtị, Yandex Nchọgharị ga-eme, ebe ọ bụ na ọ dị mma karịa onye na-asọmpi na nke a.
https://termotools.com ig.termotools.com © Nchọgharị 2019